Ngeenkwenkwezi | Eyedwarha 2021
Uqikelelo lomtshato olusekwe kumhla wokuzalwa kwakho
Ezi zibikezelo zisekwe kumhla wokuzalwa kwakho, kwaye ityhila ngomtshato wakho. Fumanisa ukuba zeziphi iintshaba zomtshato ezikugcinele zona.
Ngaba Owakho Uya Kuba Luthando Umtshato? Jonga ukuba Imigca yakho yePalm ibonisa ntoni ngayo
Nokuba uthando lwakho luya kudibana nendawo ekuyiwa kuyo okanye hayi. Nokuba amaphupha akho okuba mdala kunye aya kuzaliseka okanye hayi. Nokuba uyakufumana iqabane lobomi ngokwakho, okanye omnye umntu uya kukwenzela lona ... impendulo kuyo yonke le mibuzo ilele kwimigca elele kanye phantsi komnwe omncinci wesandla sakho.
Zityhila ntoni iiMoleki kwiminwe yakho
Ubusazi ukuba iinyengana zeminwe yakho zithetha oku? Fumanisa intsingiselo efihliweyo ukuba ithetha ukuthini kanye le nto yokuba nezi moles kwiminwe yakho…
Bangaphi abantwana oya kuba nabo ngokwemigca yesundu sakho?
Wakha wazibuza ukuba bangaphi abantwana onokuba nabo ebomini bakho? Jonga ukuba yintoni ukufundwa kwesandla malunga nenani labantwana onokuba nakho!
Ngaba igama lakho liqala ngonobumba 'A'?
Ngaba igama lakho liqala ngonobumba A? Nazi iimpawu zobuntu zabantu abamagama abo aqala ngo-A.Funda.
Unyango lokoyisa iManglik Dosha eKundali yakho
Ukuqonda ukuba yintoni le ingcinga malunga nokuba yiManglik imalunga nayo, kufuneka siqale siqonde ukuba yintoni iManglik dosha malunga nayo, iziphumo zayo kunye nonyango
Iziphumo kunye noncedo lweMercury ebuthathaka
Yintoni ukubaluleka kweplanethi yeMercury kunye neziphumo zayo kubomi bakho? Nantsi inkcazo eneenkcukacha malunga neziphumo kunye namayeza eplanethi ye-mercury engenamandla (budh grah)
Unyango olusebenzayo lweNkwenkwezi Ukufumana imisebenzi kaRhulumente
Amathuba okungena emsebenzini kurhulumente anokuphucula ngeendlela ezininzi ngokulandela la mayeza alula kunye noluncedo lweenkwenkwezi. Funda uqhubeke.
Iziphumo zeBrihaspati Kwitshathi yokuZalwa kunye neeNyango eziDibeneyo
Ukuma kweeplanethi kwitshathi yokuzalwa kunokuchaphazela ubomi bomntu, utshilo ukuvumisa ngeenkwenkwezi. Nantsi indlela iBrihaspati ebuchaphazela ngayo ubomi babantu kunye nendlela esinokomeleza ngayo iziphumo zayo ezilungileyo.
Ukuhlaliswa kwangaphandle kubonwa ngeenkwenkwezi
Funda ukuze wazi ukuba iindawo zokuhlala zangaphandle kunye namathuba okuhamba angaphandle angafundwa njani ngoncedo lwenkwenkwezi.
Bangaphi abantwana oza kuba nabo ngokweSandla sakho seZodiac
Ngaba uyavuma ukuba iinkcukacha zokuba bangaphi abantwana oza kuba nazo zinokusekwa kwisibonakaliso sakho se-zodiac? Jonga uqikelelo olutyhila inani labantwana oza kuba nalo, elisekwe kuphawu lwe-zodiac.
IPenumbral Eclipse 2020: Yazi ukuba iya kuyichaphazela njani imiqondiso eyahlukeneyo yeZodiac
Njengoko sisazi, nge-5 kaJuni 2020, siza kubona isiganeko seenkwenkwezi esiya kuba kukufiphala kwenyanga. Lo mnyama uza kuhlala ngaphezulu kweeyure ezintathu. Ukuze wazi ukuba zeziphi iindlela eziza kuchaphazela uphawu lwakho lwe-zodiac, funda eli nqaku.
Amanani anethamsanqa ahambelana nophawu lwakho lweZodiac
La manani asekwe kwimpawu yakho ye-zodiac kwaye kukholelwa ukuba ayakusebenzela. Jonga ukuba yeyiphi inombolo yethamsanqa, ngokwe-zodiac yakho.
Izinto ezi-5 Zonke iiMangliks ekufuneka zazi
Ukuba uyi-manglik oko kuthetha ukuba une-mangal dosha okanye impembelelo ye-Mars. Nazi ezinye izinto ezinokuthi zenziwe mang mangs ukunciphisa i-mangal dosha.
Umlingane wakho: Amanye amagalelo nge-Astrology
Funda ukuze wazi ukuba ungazi njani ngeqabane lakho ngoncedo lwenkwenkwezi.
Ithetha ntoni iMigca yesiBini yokuFikelela kwePentistry?
Ngaba uyazi ukuba uthetha ntoni kwilayini ephindwe kabini kwiPalmistry? Nazi iinkcukacha, zijonge…
Unyango ngeenkwenkwezi ukufumana umsebenzi kungekudala
Unyango ngeenkwenkwezi ukufumana umsebenzi kungekudala- Zininzi iindlela ezilungileyo nezilula zokuvumisa ngeenkwenkwezi ezinokwenziwa ukuze usebenze kakuhle kwikhondo lomsebenzi. Amanye amayeza adweliswe apha ukuze kuzuze abafundi.
Ithetha Ntoni Unxantathu Esandleni Sakho?
Wakhe wacinga ukuba yintoni unxantathu entendeni yesandla sakho? Ewe, jonga iinkcukacha, njengoko iinyani malunga nokubekwa konxantathu zinomdla.
Ngaba Unemigca Emininzi Esandla Sakho?
Ngaba uyazi ukuba imigca ekhoyo entendeni yesandla sakho inokutyhila lukhulu ngobomi bakho kunye nobuntu bakho? Nantsi intsingiselo yemigca.
Ukubaluleka kokunxiba isangqa seCopper, ngokweAstrology
Funda ukuze wazi ukuba zeziphi izibonelelo zokunxiba iringi yobhedu. Funda ukuze wazi ukuba zeziphi izibonelelo ngokunxiba isangqa sobhedu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi.
Iimpawu ezintle zewayini ebomvu eIndia
iyeza lasekhaya lokususa iinwele ngokusisigxina
ubugcisa bezikhonkwane obulula bezikhonkwane ezimfutshane
amanzi okusela kwisitya sobhedu ngexesha lokukhulelwa
kwenziwa kanjani ibele liqiniswe ekhaya
indlela yokucoca isitya sobisi esitshiswayo
Inyama yegusha iresiphi inyathelo ngenyathelo